'မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ'ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ပါဝင် - Yangon Media Group
‘မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ပါဝင်
”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အမေရိကန် နိုင်ငံတွင်ပြုလုပ်မည့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်၌ ပါဝင်ပြသရန် ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရ ကြောင်းသိရသည်။ ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကြီးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ Indiana ပြည်နယ် Indiana မြို့တွင်ပြုလုပ်မည့် Hobnobben Film Festival ရုပ်ရှင်ပွဲ တော်တွင် ပါဝင်ပြသခွင့်ရရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို အရင်ကလည်း နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွေမှာသွား ပြီးတော့ ပြသခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း ကျွန်မတို့တွေကံ ကောင်းခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာပြုလုပ်မယ့် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ ပါဝင်ပြသခွင့်ရပါဦးမယ်။ အရင်ကလည်း ကျွန်မပြောခဲ့ဖူးပါတယ်။ ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” အဖွဲ့သားတွေက အရမ်းကိုညီညွတ်စွာနဲ့ ငွေရေး ကြေးရေးအရ လုံလုံလောက်လောက် မရခဲ့ပေမယ့် တာဝန်ကျေပွန်စွာနဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေကို အခုပြန်လည် ခံစားနေရတာ ပါ”ဟု ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီက ပြောသည်။
Hobnobben Film Festival ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဇွန် ၇ ရက်မှစတင်ကာ ဇွန် ၁ဝ ရက်အထိ ပြုလုပ် မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းရုပ်ရှင်ပွဲတော်တွင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများ ပါဝင်ပြသခွင့်ရရှိ ရန်အတွက် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပ ရေးအဖွဲ့သို့ ဇာတ်ကားများပေးပို့ ခဲ့ရာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကျင်းပရေး အဖွဲ့မှ ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့သော ဇာတ်ကားများတွင် ”မုဒြာရဲ့ခေါ် သံ”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်း ပါ ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ခရစ်(စ)တီးနားခီမှရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ် ပြီး သရုပ်ဆောင် ဇဏ်ခီနှင့်လှယဉ်ကျေးတို့မှ အဓိကပါဝင်သရုပ် ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ”မုဒြာရဲ့ခေါ်သံ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို နိုင်ငံပေါင်း ကိုးနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်ပွဲတော်များတွင် ပါဝင်ပြသခဲ့ပြီး Platinum Award ဆုနှင့် Silver Palm Award ဆုတို့ကို ရရှိခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ရေနံချောင်းမြို့တွင် လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် စေတီတော် ထီးတော်မြေခ၊ လူတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ၍ နေအ??
စကားပြောနည်းပြီး အိုက်တင်များများ လုပ်ရတဲ့ ကာရိုက်တာမျိုး သရုပ်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျော်ေ?
မိုးကုတ်တွင် ကျောက်မျက် ကုမ္ပဏီလုပ်ကွက် မီးရှို့ခံရ၊ ကျပ်သိန်း ၂ဝဝ ကျော် ဆုံးရှုံး